Uwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Uwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram?
Oktobha 18, 2020 0 IiCententarios 1113
Ngaba wakha wazibuza Uwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram? Nokuba lilungu losapho, umhlobo okanye iqabane lakho. Ngale ndlela kukho iindlela ezininzi onokuthi uzithathe, ukusuka kwisicelo esinye esiphathwayo, yiyo loo nto siza kuthi thaca apha ngezantsi.
Njengoko uyazi, kwi ifidi ukusuka kwiakhawunti yakho ye-Instagram (kulapho kuvela khona izithuba zabalandeli bakho); Ungayibona inxenye yemisebenzi yabo, ngakumbi into abayipapashayo kwaye ukuba banabahlobo bobabini, kunokwenzeka ukuba babone "ukuthanda" abakunike ezinye iimpapasho. Le ingayindlela esisiseko, oko kukuthi, ukhetho lokuqala; kodwa kungacaciswanga kulwazi onokulufumana.
Enye indlela ibinokuba kukungaphakathi kwesicelo, cinezela uphawu lwentliziyo (apha uza kubona owakho umsebenzi ubandakanyiwe) kwaye emva koko unike apho ithi "qhubeka". Kweli candelo lesicelo, emva koko uya kuba nakho ukujonga ngokweenkcukacha ezithe vetshe imisebenzi yomsebenzisi omjongileyo; kodwa hayi eyakhe kuphela, kodwa nabanye uyabalandela.
Kungenxa yoko le nto enye indlela esele siyikhankanyile inokuba yindinisa, kuba kungathatha ixesha elide ukubona ngokuthe ngqo umsebenzisi ofuna ukumjonga. Ikwanomda, ukuba akunakwenzeka ukuba ubone ezinye izinto ezenziweyo nguloo mntu, ngaphakathi kwesicelo; Nokuba i-Instagram efanayo ibonisa kuphela inani eliqingqiweyo lemisebenzi, kodwa ayizizo zonke.
Sebenzisa i-Instagram ngqo
Enye indlela yokwenzaUwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram? Iyabona ukuba ikwi-Intanethi. Ewe kunjalo, ngale ndlela, ayizukubonelela ngayo nantoni na, ngaphandle kokwazi ukuba uqhagamshela kuloo mzuzu ungqalileyo, inokusixelela nokuba kudala kangakanani unxibelelwano lwakho lokugqibela.
Ukufumanisa oku, shaya nje i-icon ye-inbox ngqo ye-Instagram Imfuno yoku kukuba sele unencoko evulekileyo naloo mntu, oko kukuthi, sele bethethile ngaphambili; Ngale ndlela, emva koko unokubona yonke into ekhankanyiweyo kumhlathi ongaphambili.
Inyani ebalulekileyo malunga noku kukuba omnye umntu angalusebenzisi olu khetho, njengenxalenye yemfihlo yabo kwaye ke, bayayikhusela ekubonakaleni ukuba banxibelelana okanye lwalunini unxibelelwano lwabo lokugqibela. Ukuba kunjalo, le ndlela ayinakukunceda, ukuba ufuna ukubeka esweni umsebenzi womlandeli.
Snoopreport, njengesixhobo somsebenzi se-Instagram
Ngale ingentla, mhlawumbi uyathandabuza ukuba ikhona na indlela yokwenzaUwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram? Ngendlela eneenkcukacha necacileyo; Yenza ukuba ichaneke ngokukuko.
I-Snoopreport sisixhobo esikuvumela ukuba ubone ngendlela eneenkcukacha, umsebenzi womsebenzisi we-Instagram; awuzukukwazi ukubona "ukuthanda" kwabo kuphela, kodwa unokubona nezinye iintlobo zolwazi.
Zonke izinto esizinikwa sesi sicelo ziya kukhankanywa apha ngezantsi.
Snoopreport ingxelo yengxelo yeveki nganye
Ukongeza kwisixa "sokuthandwa" umntu asinikelayo, ikwasinika isixa "sezinto abazithandayo" abazifumeneyo, inani lamagqabaza enziwe; loo midla anayo umsebenzisi, ukubeka esweni, oko kukuthi, amaphepha abewalandele kwiveki ephelileyo; Inani lee hashtag ezisetyenzisiweyo, phakathi kwezinye izinto.
Njengokuba oko kwakungonelanga, sikwanokukhetha ukukhuphela ispredishithi sale ngxelo yeSnoopreport, nefomathi ye-CSV (le yifomathi efanayo naleyo isetyenziswa yiMicrosoft Excel), ukumela ngokulandelelana imisebenzi yeakhawunti esiyifumanayo. ukubeka iliso; ukongeza ekubeni unolwazi olongezelelweyo: indawo, upapasho oluthandayo nokunye okuninzi.
Isebenza njani iqonga leSnoopreport
Indlela elisebenza ngayo eli phepha ilula kakhulu: yiya kwiphepha leqonga, ubhalise ukwenza iakhawunti yomsebenzisi, ukhethe isicwangciso sokunceda Kwi-Instagram ufuna ukubeka esweni) kwaye okokugqibela, ngenisa iakhawunti (ii) eziza kuqinisekiswa.
Ngeveki, uyakufumana ingxelo, eya kuthi ibonise Umsebenzi womntu kwi Instagram iveki yonke; Idatha eza kuboniswa liqonga leSnoopreport iya kuba ichanekile, kunye nomda wephutha we-5%; oko kuthetha ukuba inqanaba lokuphumelela kwakho ngama-95%, lichanekile ngawo wonke umsebenzi onokusibonisa wona.
Njengoko ubona, iqonga lilula kwaye kulula kakhulu ukulisebenzisa, mhlawumbi elibi kukuba lifuna ukuba sihlawule ukuze sisebenzise iinkonzo zalo; kodwa kufanelekile kuyo yonke into enokusinika yona, kwaye kufuneka silawule ukuba abanye bazisebenzise ngeenjongo ezimbi.
Ukusetyenziswa koncedo lweSnoopreport
Ngokubona eli qonga, ngaphezulu kwesixhobo sokujonga umntu, unokulisebenzisa; ngakumbi abathengi kunye / okanye iiakhawunti zeenkampani, kuba ngokwazi imisebenzi yabathengi babo, banokunikezela ngeenkonzo ezingcono kubo kunye nenkonzo efanelekileyo yabathengi; eya kuguqula njengokubetha okungcono kwaye inokunceda iphepha, ukufumana abalandeli abaninzi, ukuze baziwe ngakumbi.
Kwimeko yeakhawunti ezizodwa, iSnoopreport inokusetyenziswa ngabazali okanye ngummeli, ukubeka esweni iiakhawunti zabantwana babo; nangakumbi, sisazi ukuba kule mihla, nabani na kuthi ngakumbi abantwana, banokuba ngamaxhoba okuxhatshazwa nge-intanethi, ukuxhwilwa kunye nokubiwa kolwazi. Sinokusebenzisa iqonga, ukufumanisa ii-akhawunti ezingezizo okanye ezolwaphulo-mthetho; okoko besitshilo, eli phepha lewebhu lisinika iingxelo ezichanekileyo kulwazi lwazo kunye nelog yomsebenzi omkhulu kuthi.
Siza kukushiya ividiyo efundisayo, ethi nangona ingacacanga njengoko eli nqaku linokucacisa amanye amathandabuzo onokuba nawo. Siyathemba ukuba eli nqaku likufundisile ukuba ungakwenza njaniUwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram?
Unokuba nomdla kwinqaku lethu ku Ithetha ukuthini i-dot eluhlaza okwesibhakabhaka kwi-instagram
1 Uwujonga njani umsebenzi womntu kwi-Instagram?
1.1 Sebenzisa i-Instagram ngqo
2 Snoopreport, njengesixhobo somsebenzi se-Instagram
2.1 Snoopreport ingxelo yengxelo yeveki nganye
2.2 Isebenza njani iqonga leSnoopreport
2.3 Ukusetyenziswa koncedo lweSnoopreport
Oktobha 18, 2020
Ngaba abaphulaphuli bakho basebenzisa ukutya ngakumbi okanye amaBali?
Indlela yokufumana umntu kwi-Instagram ngokulula?